संक्रमित छोरालाई हेरीरहेकी आमाको तस्बिरले संसारलाई नै बनायो भावुक ! - Nepali in Australia
April 24, 2021 autherLeaveaComment on संक्रमित छोरालाई हेरीरहेकी आमाको तस्बिरले संसारलाई नै बनायो भावुक !
काठमाडौं। हामि सबैलाई थाहा नै छ संसारको सबैभन्दा ठुलो सम्बन्ध आमासँग नै हुन्छ । आमाको माया कत्तिसम्म अपार हुन्छ भन्ने हरेक सन्तानलाई थाहा नै छ।
हामिले आमालाई भगवानको रुपमा लिने गर्छै । पछिल्लो समय एक तस्बिरले धेरैलाई भावुक बनाएको छ । तस्बिरमा अस्पतालमा भर्ती भएका कोभिडका गम्भीर बिरामीको उपचारका लागि भर्ना छन र आमाले झ्यालबाट हेरीरहेकि छिन्।
राजधानी दिल्लीका अन्य अस्पतालहरुमा पनि अक्सिजनको कमी छ । एक दिन पहिले सर गंगाराम अस्पतालमा २५ जना बिरामीले अक्सिजनको कमीकै कारण आफ्नो ज्यान गुमाएका थिए । दिल्लीमा कोरोना भाइरसको प्रभाव उच्च छ । यहाँ शुक्रबार २४ हजारभन्दा धेरैमा संक्रमण देखिएको थियो।
भारतको राजधानी दिल्लीमा कोरोना भाइरसको बढ्दो खतराबीच अक्सिजनको संकट पनि चरम अवस्थामा छ । अस्पतालमा भर्ती भएका कोभिडका गम्भीर बिरामीको उपचारका लागि अक्सिजन जरुरी हुन्छ । यसको अभाव अहिले प्राणघातक साबित भइरहेको छ।
शनिबार दिल्लीको जयपुर गोल्डेन अस्पतालमा अक्सिजनको कमीका कारण २५ बिरामीको मृत्यु भयो । अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर बलुजाका अनुसार अस्पतालमा शुक्रबार साँझ साँढे पाँच बजेसम्म आउनुपर्ने अक्सिजन मध्यराति १२ बजेमात्रै पुग्यो।
काठमाडौं उपत्यका कोरोना संक्रमण उच्च जो’खिममा, आज थप ८७२ जनालाई कोरोना पुष्टि !
आइतबारदेखि सवारीमा जोर-बिजोर लागु हुने
चीनका बरिष्ठ वैज्ञानिकको भविष्यवाणी– ‘अबको ४ हप्तामा विश्व सामान्य अवस्थामा फर्कन थाल्नेछ’
May 23, 2021 auther
जसले हज्जारौ संक्र`मित बचाए, मृ`त सयौँको संस्कार गरे, आफ्नो मृ`त्यु पछि ला`श उठाउने कोही भएन !
October 16, 2020 auther
आगामी ३ हप्ता नेपालको लागि अत्यन्तै कठिनः जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डे